﻿	Ihe kacha mma apụl apụl mgbe niile! - Ezi Ntụziaka
1/2 iko osikapa ọcha
butere brie na kranberị na pecan
ego ole calorie dị na cracker barrel hashbrown casserole
jello gbaa mere na ice cube trays
Ihe kacha mma apụl apụl mgbe niile!
Apple Crumb Pie bụ achịcha na-atọ ụtọ ma dịkwa mfe nke onye ọ bụla na-agba ọsọ.
Ngwurugwu dị nro nke jupụtara na cinnamon na-atọ ụtọ nke na-esite na apụl niile ejiri ihe ọ cụ aụ na-atọ ụtọ.
Nke a bụ achịcha apụl zuru oke iji jee ozi mgbe nri ọ bụla gasịrị!
'Ihe Kachasị mma' bụ nnukwu nkwupụta mara mma na ọ bụghị nke m na-egwu egwu… na 'Kasị Mma' dabara na Apple Crumb Pie n'ụzọ zuru oke!
Oge mbụ m jere ozi apụl a Thanksgiving ọtụtụ afọ gara aga na ọ bụ nnukwu kụrụ… na a achịcha na a rịọrọ ugboro ugboro ma ọ dịghị adịte aka!
Ọ bụrụ na ị gụọla blọgụ m, ị ga-amara na abụ m nnukwu onye na-anụ ụtọ apụl… ị ga-ahụ ihe niile Apple achịcha Tacos , Apple Crumble , na N'ụdị achịcha apụl ka Apple achịcha akwa .
Achịcha apụl apụl dị n'elu m 2 n'ezie! Ọ zuru oke mgbe niile!
ihe na-aga na hash aja aja casserole maka nri abalị
Kedu ihe kachasị mma Apple maka achịcha
Ndabere nke apụl zuru oke na-amalite site na ịhọrọ apụl kwesịrị ekwesị.
Ga-achọ apụl na-adị nkọ ma na ntakịrị tart ma ọ ga-ejide ya udi mgbe mmiri.
Mgbe ị na-esi nri apụl, ana m akwado iji a Granny Smith apụl dị ka m ji mee ihe na apụl apụl achicha achịcha.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike iji apụl ọ bụla, ụfọdụ apụl nwere ụdị mealy ma ọ bụ na-adịchaghị nro pụtara na achịcha gị nwere ike bụrụ nke anụ ahụ.
Etu apụl ole a chọrọ maka achịcha
Nke a ga-adịgasị iche dabere na usoro ị na-eji na nke elu, usoro a karịsịa na-eji ihe na-atọ ụtọ ịmịcha mkpụrụ osisi ka apụl wee dị elu.
Maka apụl apụl apụl, ị ga-achọ 8 ọkara granny Smith apụl nke ga-abụ ihe dịka 6-7 iko apụl.
Ego ole ka iko Apple bụ?
Ohaneze ị nwere ike ịtụ anya 3 ọkara apụl (ihe dị ka 1 paụnd) iji mepụta 2 1/2 iko nke apụl sliced .
Jide n'aka na ị ga-egbutu apụl gị n'ụzọ dị oke mkpa ma na apụl apụl a na-eme achịcha, ị ga-achọ ịkwado ha mara mma ma dị elu n'ihi na ha ga-ada ntakịrị ka ha na-eme achịcha!
esi mee ka osikapa krispie emeso
Hụ na ị na-achapụ apụl gị maka achịcha ka anụ ahụ nwere ike isi ike ma na-ata nri ozugbo.
M na-eji ihe apụl peeler / corer / slicer iji mee ka oru a karia.
Ha anaghị adị oke ọnụ ma ha ga - echekwa gị ọtụtụ awa!
Ntụziaka maka taco itinye na beef
Otu n'ime akụkụ kachasị ụtọ nke Apple Crumb Pie bụ topping! Ngwurugwu dị mfe ịme na achịcha a nwere ọtụtụ ihe nkwụsị!
Ọ bụrụ n’ịchọpụta n’elu na-amalite aja aja n’oge, dowe otu obere square foil n’elu etiti.
M na-eji ọmarịcha efere achịcha dị mma ma na-etinye efere achịcha mgbe niile na mpempe akwụkwọ na-eme achịcha iji mee achịcha.
Ọ bụghị naanị na pan ahụ na-eme ka ọ dịrị ya mfe ịbanye ma pụọ ​​n’ọkụ ahụ kama ọ na - amịpụta mmiri ọ bụla ma ọ bụ wụsara mmiri ga - eme ka achịcha gị daa!
Ozugbo achịcha ahụ jụrụ oyi, anyị na-echekwa ya na ụlọ okpomọkụ ekpuchitere ruo 24 awa.
Ọ bụrụ na ị ghee achịcha apụl apụl tupu oge eruo, ị nwere ike kpoo ya na oven ọzọ tupu ị jee ozi.
Anyị na-ahapụ ya na 325 degrees maka ihe dị ka nkeji 20 (kpụ ọkụ n'ọnụ site na ụlọ okpomọkụ).
ọkụkọ na-ede ede na eyịm n'elu osikapa
Anyị na-eje ozi nke a na nnukwu scoop nke vanilla ice cream ma ọ bụ pịa topping na caramel sauce!
4,82site naOgbe 174votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe25 Nkeji Oge nriAnọ Nkeji Oge zuru ezu1 aka elekere 10 Nkeji Ọrụ8 servings Onye edemedeHolly N. 'Ihe kachasị mma' dabara nke a Apple Crumb Pie n'ụzọ zuru oke, apụl na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ na apụl apụl crumble topping! Bipute Ntụtụ
▢1 oyi kpọnwụrụ (ma ọ bụ arụrụ n'ụlọ) achịcha
▢1 iko ntụ ọka
▢1/2 iko juru aja aja
▢1/2 iko ọcha shuga
▢1 ngaji ala pawuda
▢1/2 iko bọta
▢8 Granny Smith apụl
▢1/2 ngaji ihe ọ juiceụ juiceụ lemon
▢1/2 ngaji lemon rind (nhọrọ)
▢1/3 iko ọcha shuga
▢3 tablespoons ntụ ọka niile
▢1/8 ngaji ala nutmeg
Kpochapu oven ruo 450 degrees F.
Jikọta ihe niile topping na-eji ndụdụ ruo mgbe agwakọta ya kpamkpam.
Bee , isi, na iberi apụl n'ime mpekere dị mkpụmkpụ (ihe dịka 1/8 nke anụ ọhịa). Ituli aka apụl mpekere na shuga, lemon ihe ọ juiceụ juiceụ, pawuda, nutmeg na ntụ ọka.
Layer apụl Mpekere ke achịcha shei (ọ ga-abụ n'ezie zuru) na maka ọ bụla fọdụrụnụ ihe ọ juiceụ juiceụ n'elu apụl. N'elu Mpekere apụl na topping ma kpoo ya na apụl. Ebe pan pan na mpempe kuki (ha na-agbanye mmiri ma ọ bụrụ na ha zuru oke, nke a ga-azọpụta oven gị).
Ime na 450 maka nkeji 15, belata okpomọkụ ruo ogo 350 na ime agbakwunye nkeji 45-55. ( Duba etiti nke achịcha iji jide n'aka na apụl dị nro niile).
Na-arụ ọrụ okpomọkụ ma ọ bụ ụlọ dị ọkụ.
Jide n'aka na ị ga-elekwasị anya na nkwụsị gị. Ọ bụrụ na ọ malite ito aja aja n’oge, dowe ntakịrị mpempe akwụkwọ n’elu ka ọ ghara ịgba ọkụ.
Calorisị:495,Carbohydrates:84g,Protein:3g,Abụba:17g,Abụba Ajuju:9g,Cholesterol:30mg,Sodium:194mg,Potassium:Ogbe 250mg,Eriri:5g,Sugar:53g,Vitamin A:455IU,Vitamin C:8.9mg,Calcium:37mg,Iron:1.7mg
Isiokwuapụl obere achicha achịcha N'ezieDezaati Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Ntuziaka ndị ọzọ ị ga-ahụ n'anya
Apple Cheesecake achịcha
Mfe Pecan achịcha! (Emere na-enweghị ọka sirop)
Aki Achịcha Ude Achịcha